Limit Dzidziso: mutambo wekuda ungasvika kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Limit Dzidziso mutambo unodakadza wevhidhiyo uyo uchiri mukukudziridzwa, asi unotova nemifananidzo yakanaka yedemo kuratidza isu tese takamirira. Aya mapurojekiti anodakadza kazhinji anounza matambudziko makuru mukusimudzira kwavo nekuitwa, asi ndinovimba ichi hachisi chimwe cheavo mazita akamirirwa kwenguva refu akasara kumashure. Yakatanga kare kare nemari yayo kuburikidza nechaunga chinowanda.
Vagadziri vacho vachiri kushanda nesimba kuti vaone mwenje, asi sekutaura kwangu ndeye Chirongwa chikuru uye ine basa rakawanda shure kwayo. Ukuru hwayo hukuru ndewekuti iwo mutambo uyo unoitirwa kuti vatambi vaongorore, vatengese uye varwe munzvimbo huru uye yakanaka. Sezvauri kuona pane saiti yeprojekti, iwo mameseji anoenderera kumberi, zvichiratidza zviratidzo zvekuti chirongwa ichi chiri kushanda.
Chisingafanirwe kurambwa ndechekuti meseji dzichangoburwa dzinotaura nezve nhamba huru ye technical matambudziko kuti ivo vari kuenda panguva yekusimudzira kwakaomarara kwavari kumaka zita rekuti Limit Theory. Asi nekuona iyo yakanaka mifananidzo iyo yavakatisiira uye chingave chiri chekupedzisira mhedzisiro yemutambo uyu nemamwe magiraidhi akanaka uye iro rakakura renyika rizere nemikana, ndinofunga zvakakosha kuchengetedza minwe yedu kuyambuka kuti inosvika mukuzadziswa uye munguva pfupi. regai tigadzirire.
Iko hakuna kwakarongwa zuva rekuburitsa, Asi iwe zvirinani kunonoka zvishoma uye uve akanaka mukusvetuka nekutenderera kugutsa mazuva akarongwa uye vateveri vane shungu, sezvo izvo zvaigona kukupa mhedzisiro yakaipa. Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezve chirongwa ichi uye uchiona kufambira mberi kuri kuitwa, nezvimwewo, ndinokukoka iwe kuti uwane iyo yepamutemo saiti ye Limit Dzidziso. Iwe unowana iyo tabu inonzi Media uko iyo ichakuendesa iwe kuFlickr kwaunozoona inonakidza mifananidzo yandiri kutaura nezvayo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Limit Dzidziso: mutambo wekuda unogona kuuya kuLinux